Inkonzo yokufezekisa i-China ECommerce kunye nearhente | Ilanga
Zithini iinkonzo zokufezekisa?
Inkonzo yokufezekisa yindawo yokugcina umntu wesithathu ekulungiselela nokuthumela iiodolo zakho. Ikwenza oku kwiziko lokufezekisa. Iinkonzo zokufezekisa i-ecommerce zilungele amashishini angafuni kujongana nokuhanjiswa ngenqanawe okanye akhuphe amandla akhoyo okugcina izindlu ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba angabinakho ukuhambisa iiodolo ngokwazo.
I-1.Sunson API ikwenza ukuba udibanise iiwebhusayithi zakho kunye nokudibanisa idatha.
Umdibaniso we-2 kunye nenkqubo yethu yokunceda ukulungelelanisa kunye nokwenza lula ukuzaliseka kwakho.
I-3.WMS (Inkqubo yoLawulo lweNdlu) yenzelwe ukubeka esweni okwenyani kunye nokusebenza ngokukuko.
Ukuzalisekiswa kwehlabathi kwiCommerce
Umda we-eCommerce onqamlezayo wenza ukuba abathengi abanokubakho kwihlabathi liphela bafumane iivenkile zakho kunye nokuthenga izinto. Owona msebenzi wakho ubalulekileyo kukutyala imali ekuthengiseni ukwandisa ishishini lakho kwi-eCommerce. Umsebenzi wethu kukunciphisa umthwalo wokuzaliseka kwakho, ukuzalisekisa kunye nokuthumela iimpahla zakho kumnyango womthengi wakho.
Isisombululo sokuBandakanya konke sokuSebenziseka kweCommerce
Zonke iinkonzo zokufezekisa eCommerce ozifunayo, ezinje ngokugcina, ukukhetha, ukupakisha, kunye nokuthumela, zingenziwa kwi-Sunsonexpress. Emva kweminyaka yokusebenza, siyenze lula kwaye sayilungelelanisa inkqubo yokufezekisa. Ke ngoko, kufuneka wenze imisebenzi elula, kwaye inkqubo yethu yokufezekisa izenzekelayo iya kuyisingatha eseleyo.
Isisombululo sokuzaliseka kwe-ecommerce kubandakanya:
Ukugcina simahla iintsuku ezingama-90
Ukubeka uphawu kunye nokupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Cwangcisa imigaqo yokuthumela ngokuzenzekelayo
Ukujonga iindleko zexesha lokwenyani kunye nokulawula amatyala
Ulwazi lokulandela umkhondo luya kuthunyelwa ngokuzenzekelayo kubathengi
Dibanisa ngokulula iiVenkile zakho ezikwi-Intanethi
Ukuqhagamshela iivenkile zakho ezikwi-Intanethi kunye ne-Sunsonexpress kuvumela ii-odolo ukuba zivumelaniswe ngokuzenzekelayo kwinkqubo yethu kwaye siya kuzizalisekisa kwaye sizithumele ngaphandle zisuka kugcino lwethu lwase China ziye kubathengi bakho behlabathi. Kwaye iinombolo zokulandela umkhondo ziya kuhlaziywa kwiivenkile xa siphawula iiodolo zizalisekisiwe.
Singadibanisa ngokuthe ngqo kuninzi lwamaqonga evenkile ye-eCommerce kwaye akukho mda kwinani levenkile onokuthi uqhagamshele ngaphakathi kweakhawunti enye yokufezekisa.
Yenziwe etshayina? Emva koko Gcina eTshayina kunye nokuhamba ngenqanawa ukusuka eTshayina!
I-Sunsonexpress eCommerce Order Order Fulfillment Service ilungile kubarhwebi abakwi-Intanethi abafumana iimveliso zabo eTshayina okanye abathengisa ezenziwe kwimveliso yase China.
Indawo yethu yokugcina izinto iseShenzhen, China, ekufutshane nabavelisi bakho. Oku kuthetha ukuba iindleko zokugcina kunye nokuzaliseka ziphantsi kakhulu kwaye ixesha lokuhambisa lifutshane.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa sikwabonelela ngeenkonzo zokongeza ixabiso ukwenza uphawu okanye ukuphucula umgangatho wokufezekiswa kwenkonzo, njengoku: ukukhetha-mveliso, ukufakelwa uphawu olupheleleyo kunye nokupakisha okuqhelekileyo.
Iinkonzo ezininzi zeCommerce Logistic Services
Izisombululo zethu zokwenza izinto zigubungela amazwe angama-200 + kunye nemimandla kwihlabathi liphela ngeenkonzo zeposi, imigca ekhethekileyo, kunye nokuhanjiswa okuvakalisiweyo. Ukusuka kuzalisekiso lweCommerce ukuhanjiswa kwempahla, sizibophelele ekwenzeni ukuthunyelwa kwehlabathi kube lula kuwe. Imicimbi yezothutho entsonkothileyo kunye nemicimbi yokukhutshwa kwamasiko iya kujongwa sithi. Iinkonzo zethu ze-DDP kunye ne-DDU nazo kufuneka zibe nazo uninzi lwabathengisi be-eCommerce.
Ukuzaliseka kwe-ecommerce China
Inkonzo yokufezekisa i-ecommerce
Kwigumbi lokugcina izinto eligcwalisiweyo
Ukuzaliseka kwe-Ecommerce Order
Inkqubo yozalisekiso lwe-odolo ye-ecommerce
Ukugcwaliseka koGcino lweeCommerce